Sehun ရဲ့ Drama ရိုက်ကွင်းကို Coffee Truck ပို့ပြီး support ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသား Lee Seung Gi - Asia News Bar
EXO အဖွဲ့ဝင် sehun လေးနဲ့ မင်းသား Lee Seung Gi တို့ variety show အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Busted” မှာ အတူရိုက်ရင်း ညီအကိုရင်းသဖွယ် ရင်းနှီးလာကြတာပါ။ ဆက်ဆံရေးအရမ်းကောင်းတဲ့ sehun ဟာ သူချစ်ခင်တဲ့သူဆို အပြည့်အဝ support ပေးတတ်တာ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။ Lee Seung Gi “ Vegabond drama” ရိုက်တုန်းကလည်း sehun က food truck ပို့ပေးဖူးပါတယ်။
ခု လတ်တလောတော့ Sehun ဟာ Song Hye kyo နဲ့ Jang Ki Young တို့ ပါဝင်တဲ့ “Now we are breaking up” ကားကို ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Lee Seung Gi က sehun အတွက် coffee truck ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Truck ရဲ့ banner မှာတော့ “ကျေးဇူးပြု၍ wuri Sehunnie လေးကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးပါ!!! ~ lee seunggi” ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။
ကော်ဖီခွက်မှာတော့ “ဒီနေ့အတွက် Fighting !! -from Lee Seung Gi” ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ Sehun လည်း သူ့အကိုက ခုလို support ပေးတော့ ပျော်နေတဲ့ပုံပါဘဲ။ သူ့ကိုယ်ပိုင် Instagram story မှာ “Seunggi hyungie က ငါ့အတွက် coffee ဝယ်တိုက်တယ်” “စျေးကြီးတဲ့ cup ကို ငါ့တစ်ယောက်တည်းရ” ဆိုတဲ့ caption တွေနဲ့ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Sehun ကတော့ တကယ့်အချစ်ခံ ကောင်လေးပါဘဲနော်။ အထူးသဖြင့် သူက makanae မို့ ချွဲလည်းချွဲတတ်သလို သူကိုယ်တိုင်လည်း အကိုတွေကို ချစ်ရှာပါတယ်။ အကိုတွေဘက်ကလည်း ဒီညီလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်ကြပြီး support ပေးကြပါတယ်။
photo credit: @Oohsehun IG
Next စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေ ပိုတိုးလာတဲ့ တရုတ်ဖျော်ဖြေရေးလောက နဲ့ Idol Survival Show များကို ပယ်ဖျက်လိုက်ရတဲ့ IQIYI »
Previous « ၂၀၀၀ ခုနှစ်​တွေမှာ K-Drama ​လောကကို စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး (၁၀) ဦး
Kimmy ကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Mark Prin
GOT7, TWICE တို့နဲ့အတူ JYP သင်တန်းသားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသား Na In Woo
Twitter မှာ မိတ်ကပ်မပါတဲ့ selfie ပုံတင်ပြီး ARMY ​တွေကို ရူးခါ​သွားအောင် ပြုစားခဲ့တဲ့ Jin
ခွေးလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ အပြင်ထွက်လာတာတောင် Ferrari F8 Tributo စီးလာတဲ့ ဘောစိ Sehun